Abbaan taayitichaa itti fayyadamni jallisii cimaa akka jiru ibse
Finfinnee, Sadaasa 6,2009(oromiapo) – Qonnaan bulaan oomishaalee gabaadhan barbaadaman jallisiidhan oomishuun, hirkattummaa roobaa jalaa akka ba’u deeggarsa taasisaa akka jiru Abbaan Taayitaa Misooma Jallisii Shawaa Lixaa ibse.
Godinichatti tibba Bonaa lafa heektaara 77,815 jallisiidhan misoomsuun, oomisha kuntaala miiliyoona 10.4 walitti qabuuf karoorfamee hojjetamaa jira.
Abbaa taayitichaatti abbaan adeemsa hojii ekisteenshinii obbo Gazzaahany Dhiinsaa qonnaan bulaan oomisha rooba eegee oomishuun cinaatti, jallisiidhan akka fayyadamu deeggarsi taasifamaa jira.
Godinichatti marsaa jalqabaatin lafa jallisiidhan misoomsuuf karoorfame heektaara kuma 47rraa amma ammaatti kumni 19 ol qotamee sanyiidhan uwwifameera.
Ogeeyyotaan deeggaramuun hojii jallisii bonee kanaan qonnaan bultoota kuma 131 hirmaachaa jiru.
Marsaa jalqabaatin lafa misoomaa jiruun alas garri kuntaala miiliyoona 7 ni argama jedhameet yaadama.
Misooma jallisii kanaaf xaa’oon warshaa kuntaalli 311, kan uumamaa ammoo meetriik kiyuubiin 5,720 faayidaarra ooluusaa obbo Gazzaahany himanii, paamponni bishaanii 200 caalanis qonnaan bultootaf raabsamaniiru jedhan.
Godinichatti bara darbe lafti heektaarri kuma 68 ol jallisiidhan misoomee oomishti kuntaalli miiliyoona 9 argamuusaa waajjira qonnaa godinichaa waabeffachuun kan gabaase Tajaajila Oduu Ityoophiyaati.
More in this category: « Jiddu galli waggaatti xaa’oo meetriik toonii miiliyoona 2.6 oomishu ijaarramuufi Wixineen sanadaa imaammata hariiroo mootummaa qophaa’e »
Torbe Kana 1660
Ji'a Kana 1660
01/05/07 irraa eggalee 3422831
Kan Amma Daawwachaa Jiran 8